Ku Socodka Kacdoon Juqraafiyeed iyo Fursadda – Center for Advancement of Rights and Democracy (CARD)
Tijaabooyinka xogaha cusub
Maqaaladda wararka xuquuqda Itoobiya
Xogaha sharciga Itoobiya
Awood siinta dumarka iyo carruurta
Ka qaybgalka dadweynaha
Xuquuqda isticmaalka qalabka casriga ah
Kulamadda wada tashiga
Ku Socodka Kacdoon Juqraafiyeed iyo Fursadda
Home › Forums › Madasha Dhalinyarada › Ku Socodka Kacdoon Juqraafiyeed iyo Fursadda
June 20, 2022 at 12:45 am #4212 Reply
Qore: Rebuma Dejene*
Dhowaan, Hagos Gebreamlak waxa uu daabacay qormo uu ciwaan uga dhigay, “Itoobiya oo ku jirta Xiisad Juqraafiyeed”. Shaqadan fekerka leh waxay qayb muhiim ah ka tahay doodda casriga ah ee ku saabsan badbaadada Itoobiya iyo mustaqbalkeeda xilligan cusub ee tartan juqraafiyeedka caalamiga ahi socdo. Qoraalku wuxuu si geesinimo leh u sheegay in “Itoobiya ay hadda ku jirto xiisad juqraafiyeed oo uu hoos u dhacday xidhiidhkeeda juquraafi ahaaneed.” Marka la eego xaaladda hadda jirta, waxaan la dafiri karin in Itoobiya ay wajaheyso qalalaase siyaasadeed, dhaqaale xumo iyo loolan dibadeed oo dhanka xidhiidhka caalamiga ah. Si kastaba ha ahaatee, keenista aragti dheeli tiran oo ku salaysan hab taariikhi ah iyo aragti fog ayaa si aad ah loogu baahan yahay. Hagos waxa uu qormadiisa si mug leh ugu sheegay in xaalada siyaasadeed iyo dhaqaale ee gudaha Itoobiya ay soo food saartay dhibaato aad u wayn dhawrkii sano ee la soo dhaafay tan iyo markii ay bilowdeen dibad baxyada shacbi ee lagaga soo horjeedo xukuumaddii ay hogaaminaysay EPRDF. Waxa kale oo uu ku dooday in tartan juqraafiyeedka caalamiga ah iyo khalkhal caalamiga ahi ay horseedeen qalalaasaha juqraafiyeed ee Itoobiya ee gudaha iyo dibaddaba. Qoraagu waxa uu si qaddarin iyo sax ah u iftiimiyey qaar ka mid ah khataraha waaweyn iyo hagardaamada ay Itoobiya wakhtigan marayso kuwaas oo loo baahan yahay in aynu la kulanno geesinnimo, is-hoosaysiin iyo xigmad sax ah.
Si kastaba ha ahaatee, anigu asal ahaan kuma raacsani falanqaynta afar arrimood oo muhiim ah oo ka mid ah. Ugu horrayn, dabeecadda soo-bandhigidda iyo sooyaalka ah ee doodda guud oo leh diiradda xad-dhaafka ah ee arrimaha taagan iyo horumarka. Marka labaad, sheekada qormada oo u badan mid liidata oo xooga saaraysa “dib u dhaca siyaasadeed” ee Itoobiya. Marka saddexaad, faallada ku saabsan Biyo-xidheenka Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) waa mid si lafo-gur ah leh. Waxa ay ku dhammaatay in la marin habaabiyo tafaasiisha muhiimka ah iyo la’aanta aragti guud oo lama huraan u ah dooda. Ugu dambayntii, falanqaynta mushkiladda leh ee siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraykanka iyo Shiinaha ee ku wajahan Itoobiya iyo gobolka Geeska.
Haddaan u imaado doodda ugu horreysa ee qormada, qoraagu wuxuu si aan qiyaas lahayn diiradda u saaray arrimaha taagan iyo wararka marka la eego guud ahaan xaaladda juqraafiyeed ee Itoobiya ee gudaha, gobolka iyo caalamka. Haa, waan aqbalay inaan u baahanahay inaan u fiirsano oo fahanno xaqiiqooyinka hadda jira ee saameeya dhaq-dhaqaaqa dhaqaalaha siyaasadeed iyo juqraafiyeed. Si kastaba ha ahaatee, guuldarada in lagu jaangooyo dhacdooyinkii u dambeeyay ee xaalad taariikhi ah ayaa aad u dhib badan marka la eego doorkii weynaa ee ay hore ka ciyaareen go’aaminta isbeddellada juqraafiyeed ee gudaha iyo dibadda ee Itoobiya iyo gobolka Geeska. Haddii waayo-aragnimadii 1960-meeyadii, 70-meeyadii iyo horraantii 90-aadkii ay soo bandhigto hagitaan kasta oo ay siiyaan falanqeeyayaasha siyaasadda iyo goobjoogayaasha, ma ahan in doorka weyn iyo dhaxalka taariikhda loo qaadan karo mar kasta oo aan falanqeyn weyn ku sameyno su’aalaha badbaadada iyo sii socoshada dowladnimo. Jaahwareerka wakhtigan ee Itoobiya iyo jaha-wareeryada siyaasadeed waxay salka ku hayaan taariikhdeeda cakiran ee dhismihii dawladnimo iyo horumarkeedii siyaasadeed ee xigay tan iyo 1960-kii. Kor u kaca qawmiyadaha, sababaha dagaalada iyo colaadaha, faragelinta dibadeed, rabitaanka dimuqraadiyadda, nabadda iyo horumarka ayaa dhamaantood ku milmay taariikhda casriga ah ee Itoobiya. Sidaa darteed, waxaan aaminsanahay in baadhitaan kasta oo juqraafiyeda Itoobiya lagu sameeyo oo lagu guuldareysto in lagu xisaabtamo saameynta baaxadda leh ee taariikhda oo ah mid shaki ku jiro oo marin habaabin ah.
Marka labaad, sheekada qormada oo u badan mid liidata oo xooga saaraysa “dib u dhaca siyaasadeed” ee Itoobiya ayaa dhalinaysa su’aalo badan oo ka sii culus oo aan ahayn sharraxaad. Doodda ku saabsan hoos u dhaca juqraafiydda siyaasadeed ee Itoobiya ee ku wajahan dagaal sokeeye oo dhiig badan ku daatay, dhaqaale xumona keenay ayaa macno weyn samaynaysa marka la eego sida ay dooda u taagan tahay. Waxaa laga yaabaa inay tahay doodda siyaasadeed ee ugu caansan guud ahaan qaybaha siyaasadeed ee kala duwan ee Itoobiya. Dhibaataduna waxa weeye in ay jirto falanqayn iyo faallo joogto ah oo ka turjumaysa dhaqdhaqaaqyo ereyo gaaban si loo sameeyo guud-mar guud oo ku saabsan habka mustaqbalka ee taariikhda. Si kastaba ha ahaatee, odhaahdan geesinimada leh waxay ku guuldareysatay inay si dheellitiran uga fiirsato dhinaca kale ee kakan ee sheekada. Muhiimadda juquraafi-Istiraatijiyadeed ee Itoobiya ee Afrika, adkeysiga bulshada, kartida dib-u-habaynta, hiddaha iyo dhaqanka, awoodaha dhaqaale ee waaweyn, tirakoobka dadweynaha, dhaxalka taariikhiga ah ee sii wadida dawladnimada, iyo dublamaasiyadda adag ayaa ah hanti muhiim ah oo lagu go’aaminayo mustaqbalka juqraafiyeed ee gobol. Ujeeddadu halkan maaha in la diido caqabadaha jira ee dhabta ah ee aan shaki ku jirin ee dawladda Itoobiya, balse waa in la bixiyo hab ka duwan oo kakan oo liddi ku ah sheekooyinka hoos-u-dhaca ee caanka ah. In kasta oo aanan ku raacsanayn akhrinta xulashada ah ee taariikhda ee Robert D. Kaplan, wuxuu si sax ah u soo bandhigay dood muhiim ah dooddiisa khabiirka ah ee dhawaantan ee majaladda Foreign Policy: “Si loo fahmo sababta Itoobiya ay aad ugu weyn tahay inay burburto, waa lagama maarmaanka u ah in loo sahamiyo Itoobiya sidii juqraafi ahaan, dhaqan, iyo fikrad siyaasadeed, iyada oo dhammaan ay gaar u tahay.”
Falanqaynta kale ee si siman marin habaabinta ah ee ku jirta qormada GERD ayaa ah in qoraagu uu bixiyo gabagabada dhibka leh ee gorfaynta oo uu bixiyo aragti si weyn loo fasiray. Qoraagu waxa uu diiradda saaray doorka hay’adaha maaliyadeed ee caalamiga ah sida Bangiga Adduunka iyo IMF oo qayb ka ah tabaha cadaadiska maamulka Trump. Si kastaba ha ahaatee, dawladihii kala danbeeyay ayaa had iyo jeer sheegan jiray in aanay u baahnayn kaalmo dibadeed si ay u dhamaystiraan biyo xidheenka tamarta korontada laga dhaliyo marka loo eego jawiga maaliyadeed ee caalamiga ah ee aan hore u wanaagsanayn ka hor intaan la dhisin. Halkan waxa kale oo muhiim ah in la ogaado in kasta oo eexda, qaybsan iyo doorka hal-dhinac ee maamulka Trump, maamulka Biden wuxuu durba keenay isbeddel siyaasadeed oo dibadda ah kaas oo ka soo horjeeda gargaarka dibadda ee Itoobiya iyada oo loo eegayo GERD oo si cad u muujinaya wax badan. siyaasad dheeli tiran oo dhexdhexaad ah. Falanqaynta siyaasadda arrimaha dibadda ee qaan-gaadhka ah iyo doodaha dhaqaale ee siyaasadeed ee khuseeya danaha fog ee Itoobiya ee webiga Niil, GERD waxa ay soo bandhigaysaa fursado dhaqaale iyo ballanqaadyo aad u weyn in kasta oo ay jiraan caqabado dibadeed oo la saadaalin karo. Haddaba, doodda ah in muranka gobolka ee hadda ka taagan biyo-xidheenku uu ka qayb-qaadanayo dib-u-dhaca juquraafiyeed iyo qalalaasaha Itoobiya, waa mid male-awaal ah marka loo eego dabeecaddiisa. Faa’iidooyinka muddada dhexe iyo kuwa fog ee GERD ayaa aad uga miisaan badan olole kasta oo cadaadis la xidhiidha oo Itoobiya kala kulmeyso dhinacyo badan.
Intaa waxaa dheer, soo jeedinta qoraaga ee ah “Itoobiya waa in ay aqoonsato welwelka juqraafi ahaaneed ee Maraykanka iyo Masar ee ku saabsan webiga Niil” waa wax aan macquul ahayn, caqli-galna ahayn yaraan. Itoobiya ayaa kaalin wax ku ool ah ka qaadanaysa dibloomaasiyadda biyaha, iyadoo tixgelinaysa danaha macquulka ah ee dhammaan dalalka darafyadu ka leeyihiin diblomaasiyadda laba geesoodka ah iyo kuwa badanba. Dhibaatadu waxay ka timid isku dayadii da’da weynaa ee lagu doonayay in lagu sugo oo inta badan lagu dagaalamo ka faa’iidaysiga kheyraadka biyaha. GERD-da Itoobiya wax dhibaato ah uma keenayso Masar, Suudaan ama quwad kale oo caalami ah midkoodna.
Ugu dambayntii, baadhista dhow ee siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraykanka iyo Shiinaha ee ku wajahan Itoobiya iyo gobolka Geeska labadaba marka laga eego dhinacyada istraatiijiyada fog iyo dhaqdhaqaaqyada hadda socda waxay muujinayaan sawir ka duwan kan qoraagu soo jeediyay. Hagos waxa uu ku dooday in siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraykanku ay diiradda saarayso Geeska Afrika iyo gobolka badda cas oo ay si weyn ugu weecatay dhinaca Indo-pacific ga iyo “in ay gacan ka geysato qalalaasaha juqraafiyeed ee Itoobiya taasoo dalka ka dhigaysa mid aan muhiim u ahayn Maraykanka.” Si kastaba ha ahaatee, Geeska Afrika iyo gobolka Badda Cas ayaa weli ku naaloonaya istaraatiijiyad juquraafiyeed oo la taaban karo in kasta oo warbaahinta qaarkeed ay ka sheekeyneyso ka go’itaanka Mareykanka ee gobolka. Go’aanka Madaxweyne Biden uu ku magacaabay Ergeyga Gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Geeska Afrika, faragelinta badan ee colaadda Itoobiya, ansixinta dhowaan ee ah in dhowr boqol oo ciidamada dhulka ah la geeyo Soomaaliya, joogitaanka ciidamada Mareykanka ee Jabuuti iyo arrimo kale oo istaraatiijiyadeed oo muhiim ah ayaa dhammaantood muujinaya sii socoshada juqraafi-siyaasadeed iyo muhiimadda gobolka iyo Itoobiya gaar ahaan amniga qaranka Maraykanka iyo siyaasadda arrimaha dibadda.
Markay timaaddo Shiinaha iyo xidhiidhka dublamaasiyadeed ee ay la leedahay Itoobiya, in kasta oo ay sii kordhayso tirada ballan-qaadka amaahda ee hooseeya marka loo eego eedaha dabin-dabinta ee reer galbeedka iyo arrimaha gudaha, ballan-qaadyada maaliyadeed ee Shiinaha ee Itoobiya wali waa wax la taaban karo. Sida Sany iyo Sheehy ay dhawaan xuseen, “Itoobiya waxay xuddun u tahay Hindisaha Belt iyo Road ee Shiinaha. Hadda, waxa Itoobiya ka socda ilaa 400 oo mashruuc oo dhisme iyo wax-soo-saar ah oo Shiinuhu leeyahay, kuwaas oo lagu qiimeeyay in ka badan $4 bilyan.
Sannadkii 2021-kii, mugga ganacsiga laba geesoodka ahi waxa uu gaadhay 2.66 bilyan oo doolarka Maraykanka ah, kuwaas oo Shiinuhu uu Itoobiya ka soo dhoofsaday badeecooyin ku dhow 370 milyan oo doolarka Maraykanka ah, korodhka sannadba sannadka ka dambeeya 8.1 boqolkiiba. Madasha Iskaashiga Shiinaha iyo Afrika (FOCAC) oo sii kordheysa sumcadda iyo muhiimadda istiraatijiyadeed ee xidhiidhka Shiinaha iyo Afrika guud ahaan, gaar ahaan kan Itoobiya ayaa sidoo kale ah tusaale kale oo muhiim ah oo ina tusaya muhiimadda juquraafi-siyaasadeed ee gobolka oo ay ku jirto taageero dhinacyo badan ah oo u leeyahay caalamka iyo ururada. Itoobiya waxay sii ahaanaysaa saaxiibka muhiimka ah ee istaraatiijiyadeed ee siyaasadda Shiinaha ee Afrika, waxaana muddo dheer loo tixgalinayay albaabka Afrika marka loo eego muhiimada weyn iyo booska ay ku leedahay qaaradda.
Kadib markii aan soo bandhigay afarta qodob ee ugu waaweynaa ee aan kaga hadlay qormada aan diirada ku saarayo xidhiidhka ka dhexeeya gudaha iyo dibadda ee go’aaminaya siyaasadda juquraafi ee Itoobiya iyo siyaasadda arrimaha dibadda, qormadani waxa ay hoosta ka xariiqday afar doodood oo muhiim ah iyo dariiqooyin ku wajahan mustaqbalka dawladda Itoobiya ee ku wajahan qalalaasaha gudaha, gobolka iyo caalamkaba ee isbedelka juquraafi siyaasadeed iyada oo aan geeddi-socodka laga eegin dhinaca xun.
Siyaasadda Juqraafiga iyo Midda Arrimaha Dibedda waxay ka bilaabantaa Gudaha: waa In marka hore la hagaajiyo Gudaha Itoobiya
Waxaan ku raacsanahay qiimaynta Hagos in dagaal sokeeye iyo iskahorimaad daba dheeraaday oo ka socda Itoobiya oo ay weheliso dhibaato dhaqaale oo baaxad leh ay keenayso caqabad amni oo qarana ay ku noqonayso jiritaanka dawladnimada Itoobiya. Haddaba, in xal loo dhan yahay, siyaasad iyo wada-xaajood laga gaadho qalalaasaha siyaasadeed iyo amni ee ka jira qaybo badan oo ka mid ah Itoobiya waa shuruud aasaasi ah oo loo baahan yahay si loogu soo dabbaalo xasillooni iyo horumar waara Itoobiya. Richard Haass buugiisa muhiimka ah ee cinwaankiisu yahay, “Siyaasadda Ajaanibta waxay ka Bilaabanaysaa Gudaha: Dacwadda Guriga Maraykanka lagu Nidaaminayo” waxa uu si geesinimo leh u sheegay in khatarta ugu weyn ee Maraykanku aanay ka iman dibadda balse ay ka imanayso gudaha. Hadalkan weyn wuxuu sidoo kale si sax ah u khuseeyaa Itoobiya. Khatarta ugu weyn uguna khatarta badan ee Itobiya waxay ka imanaysaa gudaha marka loo eego dagaalka joogtada ah, faqriga, iyo maqnaanshaha hay’ado adag oo dimuqraadi ah iyo qaabka dhibaatada leh ee sharciga. Haddii aan la hagaajin gurigeenna, Itoobiya waxay sii wadi doontaa inay la kulanto qalalaase iyo colaado gudaha iyo dibadda ah.
Waxaan si adag u aaminsanahay in sii jiritaanka Itoobiya oo ah Jamhuuriyad ka kooban wadamo badan, oo dimuqraadi iyo federaal ah loo helo waxa lagama maarmaan ah juquraafi siyaasadeed saxan si loo helo nabad waarta, horumar iyo dimoqraadiyad waarta. Ilaalinta guulaha Itoobiya ee tobannaan sano jirsatay ee horumarka dhaqaalaha iyo soo noolaynta dhaqaalihii dagaalladu aafeeyeen ka dib COVID-19 ayaa sidoo kale in muhiimad weyn la siiyo u baahan si loo ilaaliyo mustaqbalka dawladnimo. Haddaba, fan kasta oo dibloomaasiyadeed, jaho-siyaasadeed iyo mid dawladeedba waa in uu ku bilaabmaa in si dhab ah loo qaato doorka ugu muhiimsan ee xaqiijinta nidaamka siyaasadeed ee Itoobiya.
Istaraatiijiyadda Joogtada ah ee Dib-u-habaynta Reer Galbeedka iyo Xidhiidhka Adag ee Shiinaha
Taariikh ahaan, tan iyo bilawgii taariikhda casriga ah ee Itoobiya, dunida galbeedku waxay weligeed ka mid ahayd jilayaasha ugu muhiimsan ee qaabaynta horumarka siyaasadda gudaha iyo deegaanka juqraafiyeed ee Itoobiya. Si kastaba ha ahaatee, dagaalka ka socda Itoobiya ayaa mar kale horseeday inuu xumaado xidhiidhkii dunida reer galbeedka oo ay ku sifoobeen siyaasad cadaadis, cunaqabatayn dhaqaale iyo xidhiidhka diblomaasiyadeed ee Itoobiya. Ku dhawaaqista xabbad joojinta, horumarka laga gaaray helitaanka bini’aadantinimada ee Tigray iyo suurtagalnimada in xal siyaasadeed laga gaadho dagaalka ayaa hagaajinaya xidhiidhka reer galbeedka iyo Itoobiya. Ilaalinta dardargelinta istaraatiijiyadeed iyo sii wadida istaraatiijiyadda dib-u-habaynta reer galbeedka waa inay tiir muhiim ah u noqotaa siyaasadda arrimaha dibadda ee Itoobiya. Soo afjarida geeddi-socodka daba-dheeraaday ee cunaqabataynta iyo xayiraadaha saaran Itoobiya iyo dib-u-soo-celinta xidhiidhkii muhiimka ahaa ee reer Galbeedka waa in mudnaanta la siiyo siyaasadda arrimaha dibadda. In dib loogu noqdo xidhiidhka xumaaday ee u dhexeeya Itoobiya iyo reer galbeedka iyadoo loo marayo wada shaqayn dublamaasiyadeed oo joogto ah iyo hab si taxadar leh loo wajaho waa mid labada dhinacba dan u ah.
Helitaanka fal dheeli tiran oo u dhexeeya welwelka dhabta ah ee reer Galbeedka ee soo afjaraya dagaal dhiig badan ku daatay iyo wasakh, ixtiraamka xuquuqul insaanka iyo helitaanka bini’aadantinimo iyo welwelka ay Itoobiya ka qabto amniga qaranka iyo jiritaanka dawladeed waa muhiim. Ololaha “cadaadiska ugu badan” ee reer galbeedka oo hal dhinac ah ayaa kaliya ka sii dari doona qalalaasaha waxaana laga yaabaa inay sii kordhiso fowdo kale.
Si la mid ah xidhiidhka Itoobiya waa Shiinaha. Xidhiidhkan xooggan ee Shiinaha iyo Itoobiya ee dhaqaalaha, ganacsiga, maalgashiga, kaabayaasha dhaqaalaha, siyaasadda, diblomaasiyadda iyo qaybaha kale ee muhiimka ah waa muhiim. Maaddaama ay ka mid tahay dalalka Afrika ugu xooggan ee Shiinuhu saaxiibka la yahay, Itoobiya waxay kaalin gaar ah ku leedahay siyaasadda Shiinaha ee Afrika. Joogteynta xidhiidh adag oo lala yeesho Shiinaha dhammaan dhinacyada dhaqaalaha, siyaasadda, iyo diblomaasiyadda ee muhiimka ah iyadoo la kordhinayo diblomaasiyad istiraatiiji ah oo dhamaystiran waa inay noqotaa mid ka mid ah diblomaasiyadayada.
GERD oo ah beddeleha jahada-siyaasadeed ee gobolka webiga Niil
GERD maaha oo kaliya kaabayaasha koronto-dhaliyaha ee Itoobiya laakiin sidoo kale waa beddelka ciyaarta siyaasadda biyaha ee webiga Niilka. Taariikhda juquraafi ahaaneed ee gobolka, biyo-xireenka Renaissance wuxuu calaamad u yahay isbeddelka keenista qaab cusub oo xiriir awoodeed oo ku saleysan iskaashiga labada dhinac iyo horumarinta dhaqaalaha. Waxa ay soo afjaraysaa gumaysigii Masar ee muddada dheer ku soo jiray webiga Niil, waxaanay ku bishaaraynaysaa waa cusub oo sinnaan iyo macquul ah looga faa’iidaysan karo khayraadka biyaha la wadaago. Marka si istiraatiji ah loo hadlo, GERD waxa ay sidoo kale Itoobiya ka dhigi doontaa tamarta soo socota ee tamarta nadiifka ah waxayna udub dhexaad u noqon doontaa xaqiijinta isdhexgalka dhaqaale ee gobolka ee gobolka Geeska Afrika iyo meelo kaleba. GERD waxa kale oo uu u taagan yahay mashruuc horumarineed oo qaran mideeya oo dhan walba leh oo loogu talagalay jiilka da’da yar ee Itoobiya oo leh “haa waan awoodnaa” dabeecad iyo niyad.
Nidaam caalami ah oo soo baxaya iyo muhiimadda ay Wakaaladda Itoobiya u leedahay
Doodda kale ee muhiimka ah ee warqadeyda ayaa ah in nidaamka caalamiga ah ee soo baxaya uu soo bandhigayo fursad weyn oo juqraafiyeedka ah ee dhinacyo badan oo dhaqaale, diblomaasiyadeed iyo siyaasadeed inkastoo khatarta suurtagalka ah ee la xiriirta nidaamkan. Tani maaha, si kastaba ha ahaatee, in la taageero maskax-dagaal qabow ee 2.0 ee soo ifbaxaya ee ka dhexeeya quwadaha caalamiga ah iyo jilayaasha. Dagaal kasta oo qabow iyo tartan awoodeed oo weyn oo horseeda kala qaybsanaan, colaad, tafaraaruq maaha mid dan u ah nabadda, amniga iyo horumarka oo ay Itoobiya ku jirto. Xiisadda Ukraine-Ruushka waa xaalad muhiim ah oo la tixraacayo.
Itobiya uma baahna haybad hal-xidhaale ah oo ka mid ah quwadaha caalamiga ah ama tartan awood sare oo aan xakamaysnayn. Sidaa darteed, waxaan aaminsanahay in sahaminta faa’iidooyinka iyo saamaynta nidaamka caalamiga ah ee multipolar marka laga eego dhinaca Afrika ay muhiimad weyn u leedahay dhinacyada aasaasiga ah ee horumarinta dhaqaalaha, isbeddelka cimilada, horumarinta tignoolajiyada, hawlgelinta diblomaasiyadeed iyo meelo kale oo badan oo muhiim ah.
Tusaale ahaan, ka dib markii Beijing ay ku dhawaaqday BRI sanadka 2013 ee madaxweyne Xi Jinping, USA iyo EU waxay dhowaan la yimaadeen istaraatiijiyad u gaar ah oo dib u soo celinta Better World iyo istaraatiijiyad Global Gateway siday u kala horreeyaan. Waxay siisaa doorosho iyo xulashooyin muhiim ah wadanada Afrika oo ay ku jirto Itoobiya dadaalkooda horumarineed iyada oo aan qasab ahayn in lagu lug yeesho qaab-dhismeedka dagaalka qabow. Iyada oo aan dhinacna laga soo xulin, Afrika waa in ay si taxadar leh uga faa’iidaysato oo ay sahamiso dhammaan beddelka macquulka ah si ay u buuxiso kaabayaasheeda, horumar dhaqaale iyo in ay xaqiijiso nidaam dawladnimo oo wanaagsan.
Gebagebadii, dooddaydu waxay tahay in aynaan arkin isbeddellada juqraafiyeed iyo kacdoonnada cusub ee gudaha, heer gobol iyo heer caalami oo keliya iyada oo loo marayo muraayadda ugu weyn ee dhibaatada, iyo hoos u dhaca. Waxaan si adag u aaminsanahay inay jiraan fursado joomatari oo muhiim ah, iyo ilo istaraatiijiyadeed oo muhiim ah oo si togan u saameyn kara mustaqbalka dawladda Itoobiya iyo guud ahaan Afrika. Waxaan wajahaynaa doorashooyin iyo go’aamo muhim ah oo aan ku gaadhno isgoysyada muhiimka ah ee arrimaha gudaha iyo dibadda labadaba. Si aynu uga gudubno kacdoonka juqraafiyeedka iyo waayaha adag, waxa aynu u baahannahay in aynu si qoto dheer uga baaraan degno balamaha, kartida iyo khatarta ay Itoobiya wajaheyso nooc kasta, qaabkasta iyo sifo kasta. Iyadoo ay jirto rafaadka iyo dhibaatada hadda jirta, waa in jiilka dhallinyaradu ku dadaalaan sidii ay mustaqbalka ugu arki lahaayeen muraayadda rajada, rabitaanka iyo fursadda ka baxsan mashquulkayaga koowaad ee rajo-beel-siyaasadeed.
* Rebuma Dejene waxa uu haystaa shahaadada B.A (Darajada Koowaad) ee culuumta siyaasadda iyo xidhiidhka caalamiga ah iyo M.A (Darajada Labaad) ee xidhiidhka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda oo uu ka qaatay jaamacadda Addis Ababa.
Reply To: Ku Socodka Kacdoon Juqraafiyeed iyo Fursadda
“Itoobiya ma waxay ku jirtaa qalalaasaha siyaasadda juquraafiyeed”?
Itoobiya oo ku jirta Qalalaase Siyassada ee Juqraafiyeed
Isbadalka iyo Sii Socodka Dhaqaalaha Siyaasada Itoobiya
Jidka loo maro abuuritaanka bulsho loo wada dhan yahay
Kooxaha tirada yar iyo raadintooda ka mid noqoshada siyaasad bulsheedka Itoobiya
Cilmaaniyadda oo kor loo qaado: ayay uu tahay waajibkiisa hore?